Fivoriana ho fandrindrana ny fifamoivoizana eto Antananarivo | Primature
30 décembre 2019 30 mars 2021
Mahazoarivo, ny 30 desambra 2019 – Manoloana ny fitohanana lava reny misy eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina, izay ateraky ny fanamboaran-dàlana sy ny fomba fampiasana ny lalana dia namory ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny voakasik’izany ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, izay natao androany teny amin’ny hôtel du commissariat central de police teny Tsaralalàna.
Nisy araka izany fifanakalozana teo amin’ireo teknisianina avy amin’ny polisim-pienena, zandarimariam-pirenena, ministeran’ny fitaterana, ny ATT, ny prefektiora, ny fiadidian’ny tananan’Antananarivo renivohitra sy ny maro isan-tsokajiny, ka nahafahana namaritra ireo olana sy ireo antony mitarika izany fitohanana izany ary nitondrana ireo vahaolana mifanaraka amin’izany.
Antony voalohany mahatonga ny olana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fahampian’ny fanentanana sy fampianarana ireo mpampiasa ny lalana, tafiditra amin’izany ny tsy fahampian’ny serasera eo amin’ireo tompon’andraikitra sy ny mpampiasa ny lalana, ny tsy fanajan’ireo fiara fitateram-bahoaka ireo toeram-piantsonana, ny fisian’ireo mpivarotra amoron-dàlana, ny fivezivezen’ny sarety sy posy amin’ny “heure de pointe”, ny fisian’ireo fiara maty eny rehetra eny, ny fahasimban’ny làlana, ny tsy fahampian’ny parking, sns…
Tapaka ary fa hisy komity maromaro hatsangana ho fanamorana ny fandrindrana ny fampiasana ny lalana, ka hisy ny fijerena toerana hametrahana parking vonjimaika hisorohana ny fijanonan’ny fiara eny rehetra eny, ho alamina ny toerana fiaingana sy ny farany hiantsonan’ireo fiara fitateram-bahoaka ary ireo toeram-piantsonana mety hiteraka fitohanana dia ho dinihina ny famindrana na fanafoanana azy ireny.
Hisy ny fiaraha-miasa eo amin’ny OTME sy ireo mpitandro ny filaminana mandrindra ny fifamoivoizana amin’ny fampiasana ireo camera de surveillance izay efa misy sy ny fijerena ireo toerana mbola tokony hasiana izany. Fiaraha-miasa izay hanamora ny fanaraha-maso ireo olon-dratsy mifamezivezy amin’ireny fiara fitateram-bahoaka ireny sy eny amin’ireo toeram-piantsonana izay be olona mifamezivezy, ho fanamafisana izay fitandroana ny filaminana anatin’ireny taxibe ireny ihany koa dia ilaina ny fiaraha-miasa eo amin’ny mpitandro ny filaminana sy ny lehiben’ny fokontany amin’ny fanenjehina ireo mpanendaka sy mpanao sinto-mahery.
Ho fisoroana ny fisian’ny fiara maty etsy sy eroa, dia hohamafisina ny fanaraha-maso azy ireny rehefa avy mandalo fitsirihana ara-teknika na ny visite technique ny fiara. Tsara ny manamarika fa misy fiantraikany amin’ny tontolo iainana ary miteraka aretina maro ny setroka ateraky ny fampiasana fiara misy tsy fahatomombanana ara-teknika.
Ho averina ny “police de la route” ka ho dinihina miaraka amin’izany ny fakana lamandy amin’ireo fiara miditra fourrière sy ny fakana ny taratasin’ny fiara sy ny mpamily tsy manara-dalàna.
Ho fampahafantarana sy fampianarana ny olom-pirenena mikasika ireo lalàna mifehy ny fifamoivoizana sy ny fampiasana ny lalana dia hisy ny fandaharana manokana izay ho alefa amin’ny haino aman-jerim-panjakana, mialohan’ny fampahalalam-baovao.
Efa nisy ny fanavaozana izay nataon’ny teo anivon’ny ministeran’ny Fitaterana, sy ny Fizahantany ary ny Famantarana ny toetrandro amin’ny fametrahana GPS amin’ireo fiara fitateram-bahoaka, ny zotra D no nanombohana azy, ka ezahina hitarina amin’ireo zotra hafa eto Antananarivo izany.
Farany, amin’izao akatoky ny fety izao sy mandritra ny fotoam-pahavaratra izay mahatonga ny fitohanana lehibe eto an-drenivohitra sy ny manodidina dia hanao hetsika manokana “operation spécifique” ny avy ao amin’ny polisy nasionaly sy ny zandarimariam-pirenena mba hampizotra ny fifamoivoizana araky ny tokony ho izy.
← Dinik’asa tao Maroantsetra
Fidinana tany Mahajanga →
Fiahiana ara-tsosialy : fametrahana ny « Toseke Vonje Aigne » tao amin’ny distrikan’i Bekily
Fanamafisana ny fitondrana tsara tantana eto Madagasikara